Mayelana NATHI - Yantai Stamina Mining Equipment Co., Ltd
I-Yantai yidolobha elihle futhi elichumayo lolwandle, lapha sinezinto zokuhambisa eziphelele, ithrafikhi ethuthukile, itheku laseYantai kanye nechweba leQingdao zikulungele ukuthunyelwa kuwo wonke umhlaba. Sisezindaweni zokuhweba ezikhululekile (i-FTA), uhulumeni unikeza inqubomgomo eminingi yokukhuthaza ukuthekelisa.
Ukuthunyelwa kwethu kubhasikidi we-centrifuge phesheya ezindaweni eziningi nasemazweni amaningi, ngezindleko eziphansi nekhwalithi ethembekile. Amapuleti ethu okunemba ngesihlungo namabhasikidi e-centrifuge enziwe ngentambo yocingo engu-304/316 SS, esebenza kahle ekumelaneni nokugqwala, ukumelana nomhuzuko, ukusebenza kahle kokuwasha amalahle nempilo yokuphila.
Isigubhu seMagnetic ne-VIBRATING BANANA SCREEN nayo iyimikhiqizo yethu ejwayelekile, yonke ingenziwa ngezifiso.
Sibonile ochwepheshe be-welding abajwayelene ne-standard welding standard (i-DIN standard, AS standard / JIS standard / ISO standard ...), ngezinyathelo zokutholwa kwe-weld flaw.
Sine zonke izinhlobo imishini machining like big lathe umshini, auto imishini umshini, umshini wokugaya, kulinganisa umshini nokunye, nge kahle eliphezulu futhi ngokunemba.
Ithimba lobuchwepheshe liyingqikithi yethu, onjiniyela bethu banolwazi oluhle, ngezinga eliphezulu lokuklama futhi abakwaziyo ukuxazulula izinkinga.
Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-10 yentuthuko eqhubekayo kanye nezinto ezintsha, iStamina isungule ukubambisana okuzinzile nezinkampani eziningi zaphesheya eJalimane, e-Australia, e-USA, eMongolia njalonjalo. Imikhiqizo yethu ayikhululekile ekuhlolweni kuya kumakhasimende amaningi.Nabachwepheshe bethu abanolwazi, inqubo yokulawula ikhwalithi yobuchwepheshe, amathuluzi wokuhlola aphelele, imishini yokucubungula esezingeni eliphakeme kanye nohlelo lwenkonzo yokuthengisa ngemuva kokuthengisa, siyaqiniseka ukuthi amaklayenti ethu angathola imikhiqizo engcono kakhulu nensizakalo evela Amandla.
I-Yantai Stamina Mining Equipment Co, Ltd.